Saturday May 26, 2018 - 16:24:12 in Wararka by Super Admin
Dr. Cabdi Raxmaan Xamuud Al-Sumayd wuxuu ku dhashay kuna barbaaray dalka Kuweyt Sanadkii 1947-dii. Wuxuu Shahaadada Koobaad ee Jaamacadda ka qaatay Jaamacadda Baqdaad ee dalka Ciraaq oo uu ka bartay Cilmiga Caafimaadka iyo Qaliinka Guud, kadibna wuxu
Dr. Cabdi Raxmaan Xamuud Al-Sumayd wuxuu ku dhashay kuna barbaaray dalka Kuweyt Sanadkii 1947-dii. Wuxuu Shahaadada Koobaad ee Jaamacadda ka qaatay Jaamacadda Baqdaad ee dalka Ciraaq oo uu ka bartay Cilmiga Caafimaadka iyo Qaliinka Guud, kadibna wuxuu Jaamacaddda McGill ee dalka Canada uga takhasusay Cudurada ku dhaca Uur-ku-jirka iyo Dheef-shiidka. Wuxuuna kasoo shaqeeyay Isbitaallo ku kala yaalla Canada, Kuwayt iyo Ingiriiska.
Mar uu safar ku tegay dalka Malaawi oo dhaca qaaradda Afrika ayuu kusoo arkay Malaayiin Sabool ah oo ay daashadeen Faqri, Cuduro iyo Jahli, wuxuuna Indhihiisa kusoo arkay Hey'ado Kirishtan ah oo dadkaas gargaar siinaya, balse baahida heysa uga faa'ideysanaya inay Kirishtaameyan, wuxuuna bilaabay inuu har iyo habeen ka fikiro sidii uu farqiga iyo jahliga uga badbaadin lahaa dadka ku nool qaaradda Afrika.
Sanadkii 1981-dii wuxuu Dr. Cabdiraxmaan aasaasay Hey'adda Africa Muslims Agency (Lajnatu Muslimii Ifriiqiya), oo waagii dambe Magaceeda u bedeshay Direct Aid (Al-Coownul Mubaashir) oo ah Hey'ad Samofal oo gargaarka iyo faafinta dawcada Islaamka ka fuliso qaaradda Afrika.
Ku dhowaad 30-sano oo uu Shiikhu Afrika shaqadaan ka weday waxaa sababtiisa kusoo islaamay in ka badan 11-Milyan oo qof. Al-Samiid wuxuu Afrika ka dhisay 5700 oo Masjid, wuxuu ka qoday 9500 oo Ceel, wuxuuna ka aasaasay 860-Iskuul iyo 4-Jaamacadood, wuxuu ka furay 204-xarumood oo lagu barto Diinta Islaamka, wuxuuna qarashka waxbarashada ka dhiibay in ka badan 95-Kun oo Afrikaan ah.
Dhanka Soomaaliya, kadib heshiis dhex-maray Hey'adda Direct Aid iyo Wasaaraddii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayay hay’addu xarun ka furtay Muqdisho 1986-kii, balse burburkii dowladdii dhexe iyo dagaalkii dhex-maray Kuwayt iyo Ciraaq ayaa sababay inuu xafiiskaasi xirmo bilaawgii 1991-dii, waxaana dib loo furay dhammaadkii 1992-dii, wuxuuna xafiisku xoogga saaray waxbarashada, daryeelka Agoonta iyo hirgilinta mashaariic horumarineed iyo kuwo dhismayaal ah oo uu ka fuliyay Todobo gobol.
Dhanka waxbarashada, burburkii kadib wuxuu xafiiska Hey’addu magaalada Muqdisho ka furay Iskuulada Tadaamun, Abuu-Xaniifa, Maxamud-Xarbi iyo Axmed-Gurey; Beledweyne wuxu ka furay Iskuulka Sh. Maxamed Macalin iyo Al-Aqsa; Buula-mareer wuxuu ka furay Iskuulka Al-Faaruuq; Kismaayo wuuu ka furay Iskuulka Faanoole; Magaalada Hargeysa wuxuu ka furay Iskuullada Irshaad, Gobolka Waqooyi-Galbeedna wuxuu ka furay Iskuulka Gibiley, waxaana Iskuuladaas hadda dhigta 14,270 arday.
Sanadkii 1992-kii ilaa maanta, xafiiska wuxuu deeqo waxbarasho siiyay oo uu qarashka Iskuulka ka bixiyay 55,230 arday oo isugu jirta Agoon iyo kuwo ka dhashay qoysas danyar ah, wuxuuna Lacagta waxbarashada heerka koobaad ee Jaamacadda (Bachelor) ka dhiibay 513 arday oo Soomaaliyeed iyo 71-arday oo uu ka bixiyay qarashka waxbarashada heerka labaad ee Jaamacadda(Master+PhD).
Alle ha u na naxariisto Dr. Cabdiraxmaan Al-Sumayd, kadib sanado badan oo uu u adeegayay fuqarada Afrika wuxuu 2013-kii xanuun ugu geeriyooday dalka Kuwayt isaga oo 66-jir ah, wuxuusa weli ku noolyahay qalbiyada fuqarada Afrika iyo Musliminta Caalamka.
Tirakoobka Waxqabadka Hey’adda ee Soomaaliya waxaan kasoo xigtay Gudoomiyaha Faraceeda Soomaaliya (Hassan Badawi) Xogta kalena waxaan kasoo xigtay bogga Tilifishinada Al-Jazeera iyo Al-Carabiya; iyo Maqaal uu Waxqabadkii Dr. Cabdiraxmaan Al-Samiid uu ka qoray Mr. Bill Gates oo ah Milkiilaha Shirkadda Microsoft.
In kaste oo aanan u abaal-gudi karin Dr. Al-Sumayd, ka gaabin meyno inaan u duceyno, ugana dayanno camalkiiaa wanaagsan, dadkana uga sheekeyno dadaalka iyo raadka fiican ee uu Caalamka uga tegay.
W/Q Xuseen Sabriye
Farmaajo Oo Booqasho kedis ah ku tagay Magaalada Asmara.